Sapodilla any Thailand " Journey-Assist - Inona ny sapodilla. voankazo
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Voankazo any Thailand » Sapodilla any Thailand
Zapodilla (lam ut), Lamut
SAPODILLA / Lamut / Poavatra hazo / Ahra / Zapot / Chiku
Lamut (anarana malaza any Thailand), na sapodilla, na Woody ovy, na Achra, Zapote, Chiku, Voankazo malaza be any Thailandy. Ary tsy very maina! Ny tsirony dia mitovy amin'ny tsiron'ny tantely, vatomamy landihazo ary karamela, aviavy, daty….
Ny sapodilla dia laniana vao maraina, fa izy io koa dia singa iray malaza amin'ny tsindrin-tsakafo maro sy amin'ny mofomamy isan-karazany. Matetika, sombin-kazo am-bozaka no ampiasaina handravahana ny lovia fisakafoanana. Ary sanganasa fotsiny ny milkshake misy sapodilla!
Ny haben'ny sapodilla eo ho eo dia 4 ka hatramin'ny 8 cm ny savaivony, saingy misy santionany 10 sm sy maro hafa. Miaraka amin'ny endriny laconic ellipsoidal, dia mampatsiahy tokoa ny plum mahazatra.
fihodinana mandritra ny taona, fa indrindra amin'ny fiatrehana, manomboka amin'ny volana septambra ka hatramin'ny desambra.
Ahoana ny fitehirizana sapodilla
amin'ny mari-pana ao anatin'ny efitrano hatramin'ny herinandro, ary ao anaty vata fampangatsiahana dia afaka mandry indroa mihoatra ny indroa.
Ny famantarana faharoa amin'ny fahamatorana dia ny voan'ny lamut tokony ho malefaka mitovy. Raha mafy ny voankazo dia mbola tsy vonona ny hihinana izy ary ho tart ary tsy mamy mihintsy.
Fomba fanadiovana sy fihinanana sapodila
Ny pulp an'ny voankazo lamute dia misy fructose sy sucrose be dia be, izay misy fiatraikany tsara amin'ny tonontsika, ny herintsika ary ny herintsika.
Ny tombotsoan'i Lamut dia manan-danja amin'ny fahitana, ary koa ho an'ny membrane mucous rehetra tsy manilika, ary ho an'ny hoditry ny olombelona, ​​satria be vitamina A.
Ny sapodilla tsy ampy taona dia manana fananana astringent antidiarrheal tsara. Ary amin'ny ankapobeny, io voankazo io, rehefa lanin'ny rafitra, dia misy vokany tsara amin'ny vavony sy ny tsinay.